Red Cross: waa waajib in la ilaaliyo marinnada Xalab - BBC News Somali
Red Cross: waa waajib in la ilaaliyo marinnada Xalab
Image caption Sawir hore oo laga qaaday gawaarida laanqayrta cas oo ku sugan gudaha Suuriya
Dadka loo ogolaaday in ay ka baxsadaan goobaha go’doonsan ee magaalada Xalab ee dalka Suuriya iyaga oo isticmaalaya marinnada cusub ee banii’aadminimo waxaa waajib ah in aan dhibaato loo gaysanin sidaas waxaa sheegtay Red Cross.
Hay’addu waxaa kale oo ay sheegtay in ay waajib tahay in shaqaalaha gargaarka loo ogolaado in ay gaaraan shacabka lana xaqiijiyo in aan laka reebin qoysaska doorta in ay ka baxaan magaalada. Ruushka oo xulafo la ah Suuriya ayaa sheegay in saddex marin loo furi doono shacabka, jabhadaha aan hubaysnayna mid, mid kalana loo furi doono jabhadaha hubaysan.
Dhanka kalana Maraykanku waxay sheegeen in ay qiimaynayaan bal in duqaymo diyaaradeed ay dileen dad shacab ah.
Baraha bulshada ayaa la soo dhigay sawiro dhibaato xun muujinaya oo aan la xaqiijinin kuwaas oo laga soo soo qaaday tuulada Manbij oo ku taala waqooyiga Suuriya.
War qoraal ah oo ka soo baxay Millatariga Maraykanka ayaa lagu qiray in xulafada la dagaalamaysa kooxda isku magacawday dawladda Islaamka ay weerar ka fuliyeen aagaas waxayna sheegeen in ay samaynayaan baaritaanno dheeri ah